सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरबका आयोजनको प्रगती निराशाजनक (भिडियो) – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको खर्च अवस्था यस वर्षमा पनि निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च बढाउने कार्यविधि बनाएपनि सो अनुसार खर्चको स्थिति प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको खर्च अवस्था यो वर्ष पनि निराशाजनक देखिदै गएको छ । गत वर्ष केही प्रगति देखिए पनि यो वर्षको ६ महिनायता खर्च केबल १४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको दाबी सरकारले गर्दै आएपनि सोचे अनुसार प्रगति भने गर्न सकेको छैन । यी आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै समस्या आउन नदिने प्रतिवद्धता सरकारबाट आइरहेपनि खर्चको अवस्था भने एकदमै कमजोर हुदै गएको छ । एकातर्फ सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन हेर्दा सकारात्म देखिएपनि त्यो सूचक दिगो नहुने अर्थबीद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले बताएका छन् । प्रतिबेदन सकारात्मक भएपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार खर्च गर्नमा सरकार असफल भएको बताए ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका खर्च १४ प्रतिशत मात्रै हुन पुगेको छ । सरकारको सम्पूर्ण खर्चको स्थिति २८ प्रतिशत रहेको छ । यसले सरकारको समग्र वित्तीय प्रगतिको तुलनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति थप कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ । गत वर्ष ६ महिनाको अवधिमा १८ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष १४ प्रतिशतमात्रै हुनु लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको प्रष्ट भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २० आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ८७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा आधा समय बितिसक्दा पनि १३ अर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो तीन वर्षयताकै कम बजेट विनियोजन गरिएपनि खर्च स्थिति प्रतिशतका आधारमा समेत तीन वर्ष यताकै कम हुन पुगेको छ । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विष्णु पौडेलले विकास आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च बढाउन निर्देशन दिएका थिए । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव नहुने भन्दै काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारले जति निर्देशन दिए पनि कामको गति भने सुस्त हुदै गएको छ ।
चालु वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीन वटा आयोजनाको ६ महिनाको अवधिसम्ममा खर्च प्रतिशत शून्य रहेको छ । दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ तीन वटामै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो आयोजनामा खर्च शुन्य हुन पुगेको छ । अर्थबीद् डा अधिकारीले एकातर्फ बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा पछिल्लो परिघटनाले गर्दा अझ विकास निर्माणदेखि देशको आर्थिक स्थायित्वमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने दाबी गरे । मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट अन्तर्गतका कार्यक्रम, भेरी–बबई डाइभर्सन, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको बजेट खर्च स्थिति १० प्रतिशत तल झरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा धेरै बजेट राख्ने तर पूर्वतयारी नगरिँदा खर्च न्यून हुने गरेको अर्थवीद्हरुको भनाई रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट बढी माग हुदै आएको छ । (भिडियो साभारः प्राइम टिभी)